क्यावात ! ओली सरकार : पहिलो पटक बस्यो भिडियो कन्फेरेन्समार्फत मन्त्रिपरिषदको बैठक « Janata Times
क्यावात ! ओली सरकार : पहिलो पटक बस्यो भिडियो कन्फेरेन्समार्फत मन्त्रिपरिषदको बैठक
काठमाडौं, भदौ ९ । पहिलोपटक भिडियो कन्फेरेन्समार्फत मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भिडियो कन्फेरेन्समार्फत बैठकको अध्यक्षता गर्दै आज मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको हो ।
स्वास्थ्य उपचारका क्रममा सिंगापुरमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री ओली आजको बैठकमा भिडियो कन्फेरेन्समार्फत् सहभागी हुनुभयो भने कार्यबाहक प्रधानमन्त्री इश्वरपोखरेल र मन्त्रीहरु सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहनुभयो । गर्नैपर्ने अत्यावश्यक र नियमित काम नरोकिउन भनेर प्रधानमन्त्री विदेशमै रहेको अवस्थामा पनि पहिलोपटक भिडियो कन्फेरेन्सबाट मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको हो । बैठकलाई प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्नुभएको छ । सो क्रममा उहाँले आवश्यकताका आधारमा जरुरी कामलाई निर्णय लिन कावा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिनुभयो ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार भइरहेको जानकारी दिनुभएको थियो भने उहाँको अनुहार पनि हँसिलो देखिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आएको क्रान्तिसँगै आजबाट मन्त्रिपरिषद बैठकसमेत बस्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरेको हो । यो निर्णयसँगै सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ क्रान्ति देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली भिडियो कन्फेरेन्सका माध्यमबाट बैठकमा सहभागी हुने भएपछि सरकारले गएको बुधबार मन्त्रिपरिषद बैठक सञ्चालन विधि समेत परिवर्तन गरेको थियो । जसले काठमाडौं बाहिर रहँदा पनि प्रधानमन्त्रीलाई बैठकको अध्यक्षता गर्ने बाटो खुलेको छ । नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषदको बैठकमा पहिलो पटक भिडियो कन्फेरेन्सको प्रयोग गरेको हो ।
प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यबारे योगेश : लाजको पसारो, सरकार पुर्णत असफल भएको स्वयंको घोषणा
काठमाडौं, माघ ८ । एमाले सचिव तथा स्वास्थ्य बिभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले
काठमाडौं, माघ ८ । फाल्गुनन्द लिङदेन फिल्मस्ले आयोजना गर्दै आएको ‘एफएलएफ अवार्ड’को चौथो संस्करणको मनोनयन
सोमबारसम्म वर्षा र हिमपातको संभावना, सतर्कता अपनाउन मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको सुझाव
काठमाडौं, माघ ८ । पश्चिम नेपालबाट फेरि अर्को पश्चिमी न्यून चापीय प्रणाली प्रवेश गरेको छ
उपत्यकामा आजदेखि यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली लागू, यी हुन जोरबिजोर लागू नहुने सवारी साधन
काठमाडौं, माघ ८ । कोभिड–१९ सङ्क्रमण तीव्र भएपछि त्यसलाई रोक्न काठमाडौँ उपत्यकामा आज बिहानैदेखि यातायातमा
काठमाडौं, माघ ८ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आज शनिबार सर्वदलीय बैठक बोलाउनु भएको छ ।